Khilaaf ka dhex jira Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaaf ka dhex jira Al-Shabaab
Si weyn waxaa xiiligan u soo shaac baxaya khilaaf ka dhex aloosmay hoggaanka dhanka warbaahinta ee Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xogo kala duwan oo KON heshay ayaa tilmaamaya in is fahan-waa uu soo kala dhex galay madaxda dhanka warbaahinta Al-Shabaab oo ay ku hardamayaan rag lagu kala magacaabo Ismaaciil Injineer iyo Cabdi-fitaax Axmed Guutaale oo magaciisa afgarashadu yahay Yoonis.
Labadan nin ayuu khilaafkoodu ka billawday dhanka maaliyada, waxaana Ismaaciil Injineer, oo ka mas'uul ah dhanka warbaahinta maqalka ah uu ka dalbaday Yoonis inuu kordhiyo dhaqaalaha la siiyo kooxda weriyayaasha, ee Al-Shabaab u qaabilsan dhinaca Idaacadaha, taas oo uu ku gacan seyray Yoonis.
Yoonis ayaa ku wargaliyey Ismaaciil Injineer, in aan la joogin waqtitii qeybta maqalka la xoojin lahaa, isagoo ka doorbidaya kuwa baraha bulshada ka faafiya afkaarta Kooxda iyo muuqaal duubayaasha oo inta badan soo bandhiga, howlgallada kala duwan ee ay Al-Shabaab fulineyso.
Khilaafka ayaa wixii intaasi ka danbeeyey xooggeystay, iyadoo qeybta Idaacaddaha kooxda ay ka biyo diidday, in ay la shaqeeyaan Yoonis oo ku magacaaban hoggaanka guud ee dhanka warbaahinta Al-Shabaab.
Qeybta maqalka kooxda, ayaa xilligan ka amar qaadata Ismaaciil Injineer, waxana ragga daacad u ah ka mid ah, Agaasimaha Idaacada Al-Furqaan Cabdifitaax Maxamed Qaasim, oo lagu naaneyso (Fillibiin) iyo Agaasimaha Radio Andulus Cabdulaahi Yaasiin Jaamac, oo isna ka tirsanaan jiray weriyayaashii u shaqeeyay mid kamid ah Idaacadaha Muqdisho.
Yoonis ayaa isna garab ka helaya Shaafici UK, oo shabaabka dhexdiisa looga yeero (Cabdalla Garweyne), kaasoo degganaa ka hor inta aanu shabaabku soo biirin dalka Ingiriiska, isagoo hore ula shaqeyn jiray Tv-ga Al Carabiya, waana ninka qoraalada hoose ee muuqaalada Shabaab ku turjuma afka Ingiriiska.
Wuxuu sidoo kale gacan ka helayaa Yoonis, nin lagu magacaabo Mustafa Xasan Kuble, oo loo yaqaan (Mustafa Ganeey), oo u xil saaran duubista howl gallada gaarka ah iyo hadalada amiirada, siiba ninka kooxda hoggaamiya waqtigan ee Axmed Diiriye, waana nin dhallinyaro ah oo kooxda ku soo dhex barbaaray, isla markaana ay aad ugu kalsoon yihiin xubnaha sare sare ee Shabaabka.
Khilaafkan ayaa sidoo kale kala qeybiyey, labada afhayeen ee ay kooxdu leedahay ee kala ah Cabdi-casiis Abuu Muscab oo ah afhayeenka dhanka howl gallada oo aad u adeegsada qeybta maqalka iyo Cali Maxamuud Raage, (Cali Dheere) oo ku magacaaban afhayeenka guud ee kooxda, waxaana labadan shaqsi ay la kala safteen labada nin ee hoggaanka warbaahints ku hardamaya.
Cabdi-fitaax Axmed Guutaale oo loogu yeero yahay Yoonis, ayaa ah nin ay aad u yaqaanaan warbaahinta Muqdisho, maadaama uu si toos ah ugu hanjabi jiray saxafiyiinta markii ay kooxdu ku xoogganayd caasimadda.
Ninkan ayaa sanadkii 2006-dii ka soo laabtay dalka mareykanka oo uu joogay muddo 3 sano ah, iyadoo qorshihii ugu horreeyey ee uu fuliyana uu ahaa bililiqadii lagu soo sameeyey idaacadihii ay Shabaabku qaateen oo laga xusi karo; Horn-Afrik, Quraanka Kariimka, Soomaali Weyn iyo kuwa kale.
Si kastaba Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay sanadkii 2010-kii yeeshay warbaahin gaar ah, oo ay ka shaqeeyaan weriyayaal xanbaarsan afkaartooda, wixii intaasi ka danbeeyana waxey wadeen qorshe ay ku kobcinayaan warbaahintooda, oo qeyb lixaad leh ka qaadata faafinta afkaartooda guracan.